China Yaskawa Motoman Gp8 Ukuphathwa kweRobhothi mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Ukuphathwa kweRobhothi eyi-Yaskawa Motoman Gp8
YASKAWA MOTOMAN-GP8yinxalenye yochungechunge lweerobhothi zeGP. Owona mthwalo uphezulu yi-8Kg, kwaye uluhlu lwayo lokuhamba li-727mm. Umthwalo omkhulu unokuqhutywa kwiindawo ezininzi, elilelona xesha liphezulu livunyelwe sisihlahla senqanaba elifanayo. I-6-axis nkqo yokudibanisa ngokudibeneyo ithatha isetyhula emile njengebhanti, encinci kunye nesakhiwo esincinci sengalo yokunciphisa indawo yokuphazamiseka kwaye inokugcinwa kwizixhobo ezahlukeneyo kwindawo yemveliso yomsebenzisi.
YASKAWA IMOTOMAN-GP8 yinxalenye yochungechunge lweerobhothi zeGP. Owona mthwalo uphezulu yi-8Kg, kwaye uluhlu lwayo lokuhamba li-727mm. Umthwalo omkhulu unokuqhutywa kwiindawo ezininzi, lelona gunya liphezulu livunyelwe sisandla senqanaba elifanayo. I-6-axis nkqo yokudibanisa ngokudibeneyo ithatha isetyhula emile njengebhanti, encinci kunye nesakhiwo esincinci sengalo yokunciphisa indawo yokuphazamiseka kwaye inokugcinwa kwizixhobo ezahlukeneyo kwindawo yemveliso yomsebenzisi.
I-GP8 yokuphatha iirobhothi ilungele ukubamba, ukushumeka, ukuhlanganisa, ukugaya kunye nokuqhubekeka kwamalungu amaninzi. Yamkela ulwakhiwo oluqhelekileyo lwe-IP67 kwaye inemisebenzi eyomeleleyo yokuchasana. Amanyathelo okungenelela kwemicimbi yamanye amazwe ayomelezwa kwinxalenye yokuqhuba kwengalo, enokuthi iphendule kwiindawo ezahlukeneyo zemveliso.
Intambo yekhonkco phakathi kwale mininzi ukuphatha irobhothi kunye nenkxaso ulawulo lwekhabhinethi YRC1000 itshintshile ukusuka kwezimbini ukuya kwenye, nto leyo icutha ixesha lokuqalisa kwesixhobo, yenza ukuba iintambo zibe mfutshane ngakumbi, kwaye kunciphise kakhulu ixesha lokutshintshwa kwentambo rhoqo. Umphezulu uyilelwe ngomhlaba ongekho lula ukubambelela eluthulini, ekulungeleyo ukucoceka, kulula ukuyigcina, kwaye inentsebenzo engqongileyo ephezulu.
6 8kg 727mm ± 0.01mm
32kg 1.0kva 455 ° / sec 385 ° / sec
YASKAWA IMOTOMAN-GP8 inokufakwa emhlabeni, ujonge phantsi, udonga lubekwe eludongeni, kwaye uthambekele. Xa ukufakelwa eludongeni okanye ukufakela kuthambekele, ukuhamba kwe-S-axis kuya kuthintelwa. Uyilo lwengalo ebhityileyo luvumela ufakelo olulula, olukhawulezayo nolusebenzayo kwindawo encinci, olunophazamiseko oluncinci kwezinye izixhobo, kwaye ubume bayo obuguquguqukayo kunye nobumbano bunolawulo olululo lokuhambisa kunye nokuncipha, ukuyenza ukuba ilungele indibano yesantya esiphezulu kunye neenkqubo zokulungisa khetha.
Egqithileyo Ukuphathwa kweRobhothi eyi-Yaskawa Motoman Gp7
Okulandelayo: Ukuphathwa kweYaskawa ngeRobot Motoman-Gp12
Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi,